Tilmicosin Phosphate Tilmicosin phosphate ndiyo nyowani inovandudza macrolide inorwisa mabhakitiriya kune hutano hwemhuka, ndiyo inonzi derivative midicine yeTylosin, yakanyanya kushandiswa kurwisa chirwere chechirwere chechirwere chekufema, mycoplasmosis, hutachiona hwehutachiona yenguruve, huku, mombe, gwai. Zita: Tilmicosin Phosphate Molekyamu formula: C46H80N2 O13 · H3PO4 Huremu hweMore: 967.14 CAS: 137330-13-3 Properties: mwenje wero kana yero poda, inogona kuputika mumvura. Standard: Enterprisestandard, a ...
Tilmicosin Tilmicosin ndiyo inovandudza macrolide inorwisa mabhakitiriya kune hutano hwemhuka, ndiyo inonzi derivative midicine yeTylosin, yakanyanya kushandiswa kurwisa chirwere chechirwere cheshuga chekufema, mycoplasmosis, hutachiona hwehutachiona yenguruve, huku, mombe, gwai. Zita: Tilmicosin Molecular formula: C46H80N2O13 Huremu huremu: 869.15 CAS kwete: 108050-54-0 Zvivakwa: mwenje wero kana grey poda. Standard: Usp34 Kurongedza: 20kg / kadhibhodi chigubhu, 1kg / plastiki chigubhu 6drum pane bhokisi rimwe chete. Simba ...
Tiamulin Hydrogen Fumarate Tiamulin hydrogen fumarate inyanzvi inorwisa mabhakitiriya pamishonga yemhuka, inonyanya kushandiswa kudzivirira kurwara kwekufema kwegadziriro yenguruve uye huku, inogona kukurudzira kukura kwemhuka. Zita: Tiamulin hydrogen fumarate Molecular formula: C28H47NO4S · C4H4O4 Huremu hweMero: 609.82 CAS hapana: 55297-96-6 Zvivakwa: chena kana chena-yakafanana nehupfu Mutsetse: USP34 Kuhongedza: 25kg / kadhibhodhi dhiramu Dhivha: chengetedza munzvimbo isina magetsi, nzvimbo yemhepo uye nzvimbo yakaoma. Zviri mukati: ≥98% Ap ...
Florfenicol Sodium Succinate Chigadzirwa zita: Florfenicol sodium inogonesa Chemical zvivakwa: Ichena kana chena-yakafanana nekristaro poda, inonhuwirira uye isina kunaka, kana mweya wekunyorova yakakwira ascorescent Ichi chigadzirwa chinogadziriswa zvishoma mumvura, ine furufenicol sodium inoregedza. haisi pasi pe95%. Chigadzirwa Chekushandisa: 1. Florfenicol sodium inogonesa ita iyo yeFlorfenicol solubility kusvika 300mg / ml uye yakawedzera makumi mana. 2. Florfenicol sodium inogonesa iite ...